Dhacdo aad looga argagaxay oo ka dhacdey xaafad ku taal Hargeysa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dhacdo aad looga argagaxay oo ka dhacdey xaafad ku taal Hargeysa
Waxa saaka goob qashin quba oo ku taal magaalada Hargeysa laga helay ilmo yar oo la sheegay inuu dhinac ka cunay EY kadib markii halkaas lagu soo tuurey. ”Adeer arintan way nagu soo badatay ayuu yiri gudoomiyaha xaafada, wuxuuna dalbadey in wacyigelin weyn laga sameeyo.
Ma jirto wacyigelin balaadhan ha ahaato mid qarsoon iyo mid toosaba oo ku aadan arintan, haddii aan la helin meel haweenku uga leexdaan arintan waxa dhacaysa in ay caadi noqoto taasina argagaxeeda ayay leedahay.
Ilmahan yar ayaa hooyadii dhashay dhigtey laag biyo mareena oo qashinka lagu tuuro. Dadweynaha xaafada oo arintan aad uga argagaxay ayaa isku soo baxay waxana ay ka muujiyeen walaac xooga.
”Waxa soo batey ilmaha la helayo iyo kuwa aan la helinba laakiin dhacdadan ayaa ah mid aad u xanuun badan waayo ilmahan yar EY ayaa qayb ka cunay, mana jirin cid maqashay qayladiisa hadduu noolaaba ayay tiri hooyo ku nool xaafada.
Mar haddan dhaqanada xun la deynayn maamulka waxa looga fadhiyaa meel ilmaha lagu xanaaneeyo ayuu qabaa Xuseen Warsame laakiin maamul noocana fikir noocaasa kuma jiro ayuu raaciyay.